Azonao atao izao ny mandefa Sary mivantana ho toy ny GIF ao amin'ny WhatsApp ho an'ny iOS | Vaovao momba ny gadget
Azonao atao izao ny mandefa Sary mivantana ho toy ny GIF ao amin'ny WhatsApp ho an'ny iOS
Raha mpampiasa fitaovana iOS ianao dia ho liana hahafantatra izany, amin'ny fanavaozana farany an'ny WhatsApp Ho an'ity rafitra fiasa ity, ireo izay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza dia nametraka fampiasa vaovao ka, mifototra amin'izany, afaka mandefa ny sary mivantana anao ianao toa ny GIF mientanentana. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fiasa izay mety hahomby kokoa eo amin'ireo mpampiasa Apple.
Raha manao fahatsiarovana kely, ao amin'ireo fanavaozana farany navoaka dia ahita vaovao toa ny fanovana ny toerana misy ny sarin'ny mombamomba azy, izay eo ankavia izao, ny mety hanaovana antso avy amin'ilay fampiharana mihitsy, emoji vaovao sy lehibe kokoa, mety hotononina. olona iray ao anaty vondrona iray ary ny fahaizana mampiditra GIF ao anaty hafatrao dia natolotra mihitsy aza. Tsy misy isalasalana, ny ampahany amin'ny GIF dia ny zava-baovao izay tian'ny mpampiasa indrindra indrindra, indrindra satria ny fahafahany mandefa horonantsary izay latsaky ny 6 segondra amin'ny vondrona amin'ity endrika ity.
Ireo mpampiasa IOS dia afaka mandefa ny sarin'izy ireo mivantana ho GIF ao amin'ny WhatsApp.
Na dia miresaka momba ny 'vaovao'ao amin'ny WhatsApp, ny marina dia maro amin'izy ireo, toy ny mety handefasana GIF ho an'ny olona ifandraisanao, dia efa nampiharina tamin'ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa toy ny telegramaRaha ny hevitro dia mavitrika kokoa izy io satria, ankoatry ny zavatra hafa, zavatra izay tsy avelan'i WhatsApp amin'izao fotoana izao, dia manome ny fahafahan'ny mpampiasa rehetra mandefa GIF mihetsika amina tolotra fanta-daza toa an'i Tenor na Giphy.
Ho teboka iray manohana ny WhatsApp dia tsy maintsy tadidintsika fa ity serivisy ity Izy io dia iray amin'ireo havaozina farany mandeha Ka tsy azo holavina izany, satria hitan'ny vondrom-piarahamonina fa tena mety ny mampiasa GIF, ny dikan-teny vaovao dia mety ahitana fiasa sy fanatsarana vaovao amin'ity lafiny ity ary koa ny fampifanarahana azy ireo miaraka amin'ireo serivisy Tenor na Giphy voalaza etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Azonao atao izao ny mandefa Sary mivantana ho toy ny GIF ao amin'ny WhatsApp ho an'ny iOS
Ireto ny sasany amin'ireo fifanarahana Aliexpress tsara indrindra ho an'ny Andro Singles
Ny terminal Android One voalohany misy ny Android 7 dia nahatratra ny tsena